Sheekada filimka Haseena Parkar: Shraddha wey dadaashay laakiin filim kuma dhicin! | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Haseena Parkar: Shraddha wey dadaashay laakiin filim kuma dhicin!
Sheekada filimka Haseena Parkar: Shraddha wey dadaashay laakiin filim kuma dhicin!
Sheekooyinka laga sameeyo gangestaradii Bombay ka talin jireen 70-maadkii iyo 80-maadkii Bollywood-ka kama daalaan inay sheekooyin ka sameeyaan.
Labo todobaad ka hor Arjun Rampal ayaa tiyaatarada loo saaray filimka Daddy oo looga hadlaayay nolosha gangester-kii weynaa Arun Gawli laakiin daawadayaasha masoo dhaweynin.
Maantana waxaa masraxa la saaray filimka Haseena Parkar ee Shraddha Kapoor hogaamiye ka tahay loogana hadlaayo burcadkii weynaa Dawood Ibrahim walaashiis Haseena Parkar oo geeriyootay iyo sida ay awood ugu laheyd maamulida hantida walaalkeed lahaa iyo go’aamada adag oo ay qaadan jirtay.
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 4-daqiiqo
Jilaayaasha: Shraddha Kapoor, Ankur Bhatia, Siddhant Kapoor
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Haseena: Bandhiga Shraddha iyo sida baaritaan loogu sameeyay noloshii Haseena
Muxuu Ku Liitaa Haseena: Waa sheeko aan mada daalo laheyn sidoo kalena si liidato loo dhigay fariin ahaan xiiso gaar ah laheyna.
Fariinka Filimka Haseena Parkar: wuxuu ka hadlaa nolosha haweenay iska caadi ah oo danta ku qasbeyso inay arimaha gaangester-nimo ku lug yeelato.
Haseena Parkar (Shraddha Kapoor) waxay ku nooshahay magaala Bombay bartamaheeda ayadoo kasoo jeedo qoys sabool ah waxayna aad ugu dhow dahay oo ay saaxiib la tahay walaalkeed Dawood (Siddhant Kapoor).
Dawood (Siddhant Kapoor) wuxuu noqonaa dambiile burcad ah oo Bombay dhan laga cabsado sidoo kalena awood badan.
Halka Haseena ay guursaneyso ninka qalbiga wanaagsan Ibrahim Parkar (Ankur Bhatia), balse nasiib daro Haseena seygeeda waxaa loo dilaa aar gudasho ku aadan walaalkeen dhibaato uu geestay!
Dawood (Siddhant Kapoor) wuxuu noqonaa Gaangester-ka Bombay ugu weyn markii dambena qaraxyadii Bombay ka dhacay sanadii 1993 ayuu ku lug yeelanaa wuuna isag baxsanaa Hindiya asigoo Dubai u guurayo.
Haseena ayay dhibaatada soo wajaheysaa sidoo kalena burcada qaar bartilmaameed ka dhiganayaan iyadana waxay go’aan ku gaaree inay saldanadii walaalkeen ka tagay la wareegto kuna soo baxeyso haweenay reer Mumbai oo dhan ka cabsadaan.
Qaybaha dambe waxaa loo daawan doonaa Haseena saldanada ay la wareegtay iyo dhibaatooyinka sharci ahaan soo wajihi karo iyo nolosha kale ee gaangester-nimo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Haseena Parkar: Filimkaan si wanaagsan ayuu ku bilaabanaa sheeko ahaan balse dhibaatada waxay tahay in diirada la saaray ficilada gaangester iyo dhibaatada ay geesanayaan halka daawadayaasha loo sharxi lahaa noloshii Haseena iyo doorkeedii gaangester-nimo sida uu ahaa.
Sidoo kalena Director Apoorva Lakhia sheekadiisa wey isku qasan tahay waayo waagi hore 80-maadkii iyo xiliyadaan casriga ah ah fariin ahaan ma uusan kala saarin waana lagu caajisaa.
Bandhiga Jilaayaasha: Shraddha Kapoor si fiican ayay doorka Haseena u matashay inkastoo xoogaa ku yara dhibtootay ka run sheegida marka ay mataleyso Haseena oo duq ah laakiin sida guud filimkaan doorkeeda ayaa loo daawan karaa.
Siddhanth Kapoor oo si run ah Shraddha ula dhashay doorkiisa Gaangester-nimo ma ahan mid kusoo jiidanayo wuxuuna la yimid bandhig iska dhe dhexaad ah.
Ankur Bhatia inkastoo doorkiisa mid weyn ahayn hadana si wacan ayuu kaaliintiisa kooban oo uu Shraddha seygeeda ku matalaayo kaga baxsaday.
Gunaanad: Haseena Parkar wuxuu ku guul dareestay inuu dadka soo jiito sababtoo ah fariin adag ma xambaarsano, sidoo kale Action wacan malahan, dareen qiiro badana laguma soo darin waana arimaha filim nolosha Gaangester ka hadlaayo lagu daawan karo.
Dadka filimka ka faaloodaan Haseena Parkar waxay siiyeen 2/5 taasi oo muujineyso in fariin ahaan aad u liito sidoo kalena filimkaan lasoo dhaweyn doonin dhanka Boxoffice-ka marba sheekadiisa dhaliil xoogan loo soo jeediyay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Haseena Parkar:
Waxaa Aqrisay 944